ကလေးတှကေို လိငျပညာပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျမယျ့ အကြိုးကြေးဇူး(၅)ခု - For her Myanmar
ဖွမေဆညျနိုငျတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေို ကွညျ့ပွီး သငျခနျးစာယူသငျ့ပါပွီ
ယောငျးတို့ရေ… သကျငယျမုဒိနျးမှုတှေ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုမြားလာတဲ့ခတျေကွီးထဲမှာ အရငျကလို ရှေးရိုးစှဲတှကေို လကျကိုငျထားပွီး လိငျပိုငျးဆိုငျရာတှကေို ရှကျရှံ့စရာတဈခုလို ဖုံးကှယျထားဦးမှာလား… လိငျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ပတျသကျပွီး မကျြစိပိတျနားပိတျ လုပျထားလို့ရော ယောငျးတို့ ကလေးတှကေ မသိမမွငျတော့ဘဲနမေတဲ့လား… ဖုံးကှယျထားတဲ့အရာကိုမှ ပိုသိခငျြစမျးသပျခငျြကွတာ သဘာဝမို့ ယောငျးအနနေဲ့ အတှေးအမွငျတှေ ပွောငျးလဲဖို့အခြိနျတနျပါပွီ… ပွောငျးလဲဖို့သငျ့မသငျ့ကိုတော့ မငျမငျပွောပွပေးမယျ့ ကလေးတှကေို လိငျပညာပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ဖတျရှုပွီး ဆုံးဖွတျကွညျ့ပါနျော….
ကြားမ လိငျအင်ျဂါကှဲပွားတာကို အထူးအဆနျး ဖွဈမနတေော့ဘူး။
လိငျအင်ျဂါကှဲပွားစှာ တညျရှိပုံအကွောငျး ယောငျးတို့ကလေးတှကေို အသိပညာပေးထားတဲ့အတှကျ ခွားနားမှုတှေ တှကွေုံ့လာရတဲ့အခါ စူးစမျးလလေ့ာလိုစိတျ မဖွဈတော့ဘဲ သဘာဝတရားက ပုံသသေတျမှတျထားတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှအေဖွဈသာ သူတို့လကျခံယုံကွညျနမှောဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ကြောငျးစတကျမယျ့ သားသားမီးမီးတှေ ကြောငျးနပြေျောစဖေို့ နညျးလမျး(၆)သှယျ
ယောငျးတို့ကလေးတှေ အသကျအရှယျအရ ဟိုမုနျးအပွောငျးအလဲတှေ တှကွေုံ့လာရတဲ့အခါမှာလညျး ထိတျလနျ့ကွောကျရှံ့မှုမရှိဘဲ မိဘနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တိုငျပငျတတျလာပွီး အလိုကျအထိုကျ ပွုမူနထေိုငျတတျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးနှောငျ့ယှကျခံရမှု ကငျးဝေးနိုငျမယျ။
ယောငျးတို့ကလေးတှကေို လိငျအင်ျဂါဆိုတာ စနောကျကစားစရာတဈခု မဟုတျကွောငျး အသိပညာပေးထားမယျဆိုရငျ စနောကျမှုကို အကွောငျးပွပွီး လိငျပိုငျးဆိုငျရာကို ထိတှကေို့ငျတှယျခံရတာတှကေို ဟနျ့တားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
သကျငယျမုဒိနျးမှုတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့တတျတဲ့ ကလေးတှကေို မုနျ့ဝယျကြှေးတာ ၊ အရုပျပေးတာ ၊ မုနျ့ဖိုးပေးတာတှနေဲ့ ဖွားယောငျးပွီး ဆော့ကစားသလို လိမျလညျကာ လိငျအကွမျးဖကျဖို့ ကွိုးစားတတျကွတာကို ယောငျးတို့ကွုံဖူးကွမှာပါ။ လိငျအသိပညာရှိထားပွီးသား ယောငျးတို့ကလေးတှကေတော့ ဒီလိုအကွမျးဖကျတာမြိုးကို ခုခံရကောငျးမှနျးနားလညျပွီးသား ဖွဈနမှောပါ။
ယောငျးတို့က လိငျပညာပေးထားတဲ့အတှကျ ကလေးတှအေနနေဲ့ သူတို့မှာလိငျနဲ့ပတျသကျပွီး တဈခုခုကွုံတှခေံ့စားလာရတဲ့အခါ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွတိုငျပငျလာမှာပါ။ ဘယျသူကတော့ သူတို့ကို လိငျနဲ့ပတျသကျပွီး စနောကျတယျ ၊ ကိုငျတှယျလိုကျတယျဆိုတာမြိုးကို ပွနျပွောလာတဲ့အတှကျ ယောငျးတို့အနနေဲ့ ကလေးတှအေတှကျ ကွိုတငျကာကှယျမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။
ဖုံးကှယျထားတဲ့ကိစ်စဆို ကလေးတှမေပွောနဲ့ အရှယျရောကျနပွေီးသား မငျမငျတို့တောငျ လကျတညျ့စမျးခငျြကွတာ သဘာဝပါ။သူတို့အရှယျအလိုကျ သိသငျ့သိထိုကျတာတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ လိငျပညာပေးထားမယျဆိုရငျတော့ ဒီကိစ်စကို စမျးသပျသငျ့လား ၊ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှေ ဘယျလိုရှိလာနိုငျလဲဆိုတာကို ကောငျးကောငျးကွီးနားလညျတဲ့အတှကျ စမျးသပျခငျြစိတျလြော့နညျးစနေိုငျပါတယျ။
Related Article >>> မိထှေးတဈယောကျအနနေဲ့ သားသမီးတှနေဲ့ ဆကျဆံရေးပွလေညျအောငျ ဘယျလိုနသေငျ့လဲ ?
ယောငျးတို့ရေ.. ကွိုတငျကာကှယျခွငျးဟာ ကုသခွငျးထကျ ထိရောကျတယျဆိုတဲ့ စကားက အလကားမဟုတျပါဘူးနျော။ ကွုံတှလေို့ကျရမှ ဖွမေဆညျနိုငျဖွဈနတောမြိုးထကျစာရငျ မဖွဈခငျ ကွိုတငျဟနျ့တားမှုတှေ ရှိထားတာအကောငျးဆုံးပဲမို့ လိငျပညာပေးသငျ့ မပေးသငျ့ကို ယောငျးတို့ ကိုယျတိုငျသာ ဆုံးဖွတျကွညျ့ပါတော့နျော…
ဖြေမဆည်နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူသင့်ပါပြီ
ယောင်းတို့ရေ… သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုများလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အရင်ကလို ရှေးရိုးစွဲတွေကို လက်ကိုင်ထားပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ရှက်ရွံ့စရာတစ်ခုလို ဖုံးကွယ်ထားဦးမှာလား… လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မျက်စိပိတ်နားပိတ် လုပ်ထားလို့ရော ယောင်းတို့ ကလေးတွေက မသိမမြင်တော့ဘဲနေမတဲ့လား… ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုမှ ပိုသိချင်စမ်းသပ်ချင်ကြတာ သဘာဝမို့ ယောင်းအနေနဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပါပြီ… ပြောင်းလဲဖို့သင့်မသင့်ကိုတော့ မင်မင်ပြောပြပေးမယ့် ကလေးတွေကို လိင်ပညာပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖတ်ရှုပြီး ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါနော်….
ကျားမ လိင်အင်္ဂါကွဲပြားတာကို အထူးအဆန်း ဖြစ်မနေတော့ဘူး။
လိင်အင်္ဂါကွဲပြားစွာ တည်ရှိပုံအကြောင်း ယောင်းတို့ကလေးတွေကို အသိပညာပေးထားတဲ့အတွက် ခြားနားမှုတွေ တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါ စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ် မဖြစ်တော့ဘဲ သဘာဝတရားက ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအဖြစ်သာ သူတို့လက်ခံယုံကြည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကျောင်းစတက်မယ့် သားသားမီးမီးတွေ ကျောင်းနေပျော်စေဖို့ နည်းလမ်း(၆)သွယ်
ယောင်းတို့ကလေးတွေ အသက်အရွယ်အရ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာလည်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲ မိဘနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်တတ်လာပြီး အလိုက်အထိုက် ပြုမူနေထိုင်တတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်ခံရမှု ကင်းဝေးနိုင်မယ်။
ယောင်းတို့ကလေးတွေကို လိင်အင်္ဂါဆိုတာ စနောက်ကစားစရာတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း အသိပညာပေးထားမယ်ဆိုရင် စနောက်မှုကို အကြောင်းပြပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခံရတာတွေကို ဟန့်တားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ ကလေးတွေကို မုန့်ဝယ်ကျွေးတာ ၊ အရုပ်ပေးတာ ၊ မုန့်ဖိုးပေးတာတွေနဲ့ ဖြားယောင်းပြီး ဆော့ကစားသလို လိမ်လည်ကာ လိင်အကြမ်းဖက်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြတာကို ယောင်းတို့ကြုံဖူးကြမှာပါ။ လိင်အသိပညာရှိထားပြီးသား ယောင်းတို့ကလေးတွေကတော့ ဒီလိုအကြမ်းဖက်တာမျိုးကို ခုခံရကောင်းမှန်းနားလည်ပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။
ယောင်းတို့က လိင်ပညာပေးထားတဲ့အတွက် ကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့မှာလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုကြုံတွေ့ခံစားလာရတဲ့အခါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြတိုင်ပင်လာမှာပါ။ ဘယ်သူကတော့ သူတို့ကို လိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စနောက်တယ် ၊ ကိုင်တွယ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကို ပြန်ပြောလာတဲ့အတွက် ယောင်းတို့အနေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စဆို ကလေးတွေမပြောနဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီးသား မင်မင်တို့တောင် လက်တည့်စမ်းချင်ကြတာ သဘာဝပါ။သူတို့အရွယ်အလိုက် သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ လိင်ပညာပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စကို စမ်းသပ်သင့်လား ၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဘယ်လိုရှိလာနိုင်လဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်တဲ့အတွက် စမ်းသပ်ချင်စိတ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> မိထွေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင် ဘယ်လိုနေသင့်လဲ ?
ယောင်းတို့ရေ.. ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက အလကားမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကြုံတွေ့လိုက်ရမှ ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်နေတာမျိုးထက်စာရင် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ဟန့်တားမှုတွေ ရှိထားတာအကောင်းဆုံးပဲမို့ လိင်ပညာပေးသင့် မပေးသင့်ကို ယောင်းတို့ ကိုယ်တိုင်သာ ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါတော့နော်…
Tags: children, doll, Knowledge, Sex Education, side effect, understand